प्रवास Archives - Page2of 194 - Samudrapari.com
काठमाडाैं - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अफ्रिकी देशबारे गरेको सम्बोधनलाई लिएर आफूलाई गलत पुष्टि गर्ने प्रयास भएको मङ्गलबार बताएका छन् । केही दिन पहिले ट्रम्पले केही अफ्रिकी देशबारे अशिष्ट र अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । तर उनले आफूमाथि लगाइएको आरोप गलत रहेको दावी गर्दै त्यसको खण्डन गर्दै आएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, “उमेरका गैरकानूनी आप्रवासीलाई रोक्न र योग्य जनशक्ति भित्रमउनका निम्ति गर्न लागिएको एउटा सम्झौता प्रयासमा ममाथि लगाइएको गलत आरोपले समस्या उत्प...
काठमाडौँ - इन्डोनेसियन प्रहरीको इन्काउन्टरमा एकजना नेपाली मारिएका छन् । लागू औषध तस्करीमा संलग्न भएको अभियोग लागेका ती नेपाली युवा जाकर्ता मेट्रो पुलिसको इन्काउन्टरमा गत शुक्रबार मारिएका हुन् । मलेसियाको बाटो हुँदै लागू औषधसहित जाकर्ता पुगेका ३४ वर्षीय नेपाली युवा शरणकुमार तामाङ प्रहरी कारबाहीमा मारिएका हन् । तर, उनको नेपालस्थित ठेगाना भने खुलाइएको छैन । सेन्ट्रल जाकर्ता मेट्रो पुलिस प्रमुख वरिष्ठ कमश्निर रोमान हुताज्लुका अनुसार मलेसियाबाट लागूऔषधसहित ती युवा जाकर्ता आएको सूचना मिलेपछि गरिएको...
काठमाडौं - इन्डोनेसियामा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राष्ट्रपतिको विरोध गरेको आरोपमा एक युवालाई १८ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ । इन्डोनेसियाको सुमात्रा निवासी १८ बर्षिय एक युवाले नक्कली आइडी मार्फत राष्ट्रपति जाको विडोडोलाई गाली गलौज गरेको पाइएपछि उनलाई पक्राउ गरी जेल सजाय सुनाइएको हो । उनले फेसबुकमार्फत आफूलाई हिम्मत भए पक्राउ गर्न सुरक्षाकर्मीलाई चुनौतीसमेत दिएका थिए । उनको पक्राउले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरु समेत सचेत भएका छन् । पक्राउका क्रममा ती युवाले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै सजाय भ...
काठमाडौं - भारतको तमिलनाडुका दुई स्थानमा आयोजना गरिएको साँढे दौड प्रतियोगितामा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा सय जना घाइते भएका छन् । भारतमा बर्सेनी आयोजना गर्दै आएको जल्लीकट्टु नामको यो खेलमा साँढेलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्दा उक्त घटना भएको हो । वर्सेनी आयोजना हुने यो खेलमा अप्रिय घटना हुन थालेपछि भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यद्यपी भारतभर यसको विरोध हुन थालेपछि प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको थियो । विशेष गरी साँढेलाई निर्धारित बाटोमा दौडाएर नियन्त्रणमा लिने यो खेलको नियम रहेको छ । यद्यपी...
अमेरिका – अमेरिकाले प्यालेस्टाइनलाई दिँदै आएको सहयोगमा कटौती गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहायता कोष मार्फत प्यालेस्टाइनलाई दिन लागिएको ६५ अर्ब डलर अमेरिकाले रोकेको हो । प्यालेस्टाइनलाई दिने एक सय २५ अर्ब डलरमा अमेरिकाले अब जम्मा ६० अर्ब डलर मात्र दिने बिबिसीले जनाएको छ । राष्ट्रसंघका अधिकारीले भने अमेरिकाको पछिल्लो कदमले हजारौँ प्यालेस्टाइनी प्रभावित हुने बताएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्यालेस्टाइनले इजरायलसँगको शान्ति वार्ता अस्वीकार गरे सहायता रकम कटौती गर्ने यसअघि नै...
काठमाडौं - लिबियाको राजधानी त्रिपोली नजिकै रहेको एक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा बन्दुकधारी लडाकु समूह र सरकारी सुरक्षाफौँजबीच भएको झडपमा २० जनाको मृत्यु भएको छ । उक्त दोहोरो भिडन्तमा ६३ जना घाइते भएका छन् । जेलमा रहेका आफ्ना समर्थकलाई छुटाउन लडाकूहरुले विमानस्थलमा आक्रमण गरेपछि सरकारी पक्ष र आक्रमणकारी पक्षबीच झडप भएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । झडपका क्रममा भएको गोलाबारीमा परी ६ वटा विमान प्रभावित भएको जनाइएको छ । मारिएका मध्ये कति जना लडाकूतर्फका छन् र कति जना सर्वसाधारण छन् भन्ने बारेम...
अमेरिकाको भर्जिनियामा यसरी मनाइयो तमु ल्होसार !
वाशिंगटन - डिसी अमेरिकाको भर्जिनियामा खी ल्हो (तमु ल्होसार) मनाइएको छ । ग्रेटर वाशिंगटन तमु समाजको आयोजनामा तमु ल्होसार- २०१८ मनाइएको हो ।कार्यक्रममा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कुमार कार्की प्मुख अतिथि रहनुभएको थियो । कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै उहाँले प्रवासमा पनि गुरुङ संस्कृतीको प्रवद्र्धनका गरिएकोमा आयोजकलाई धन्यवादन दिनुभएको थियो । यस्ता कार्यक्रमले नयाँ पुस्तामा संस्कृति हस्तान्तरण गर्न पनि सहत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने उहाँको भनाई थियो ।कार्यक्रममा ग्रेटर वाशिंगटन तमु समाजका निर्वत...
काठमाडौं - अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित सार्न बर्नाडिनो नजिककोपेरिस नगरमा बन्धक बनाइएका बालबालिकासहित एउटै परिवारका १३ जनालाई प्रहरीले उद्धार गरेको छ । उद्धार गरिएकामा २ देखि २९ बर्ष उमेर समुहका रहेका छन् जसमध्ये ७ जना १८ देखि २९ बर्षका वयस्क पनि रहेको बीबीसीले जनाएको छ । पीडितमध्येकी भाग्न सफलएक किशोरीले आकस्मिक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गरी आफ्ना दाजुभाइ र दिदी बहिनीलाई अभिभावकले नै बन्धक बनाएको जानकारी गराएकी थिइन् । उनीहरुलाई फोहोर र दुर्गन्ध आउने कोठामा सिक्रीले बाँधेर राखिएको पाइएको थ...
लिबियाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको झडपमा नौ जनाको मृत्यु
त्रिपोली - लिबियाको राजधानीमा रहेको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार लडाकूहरुले आक्रमण गरेपछि भएको झडपमा परी नौ जनाको मृत्यु भएको छ । जेलमा रहेका आफ्ना समर्थकहरुलाई छुटाउन भन्दै लडाकूहरुले विमानस्थलमै आक्रमण गरेपछि सरकारी पक्ष र आक्रमणकारी पक्षकाबीचमा झडप भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । मिटिगा विमानस्थलमा आक्रमण भएर झडप भएपछि विमानस्थल खाली गराइएको थियो । मारिएका मध्ये कति जना लडाकूतर्फका छन् र कति जना आम नागरिक छन् भन्ने बारेमा अहिलेसम्म केही खुल्न सकेको छैन । केन्द्री...